အားလုံး ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအိပ်မက် ဥရောပမှာလျှို့ဝှက်ကျောက်မျက်တွေအပြင်ထင်ရှားတဲ့ဥရောပမြို့တော်တွေဆီလည်ပတ်ခြင်းအကြောင်း. သူတို့ထဲကတစ်ဦးကဓာတ်ပုံတစ်ပုံပျော်ရွှင်စွာ Eiffel Tower အနားမှာရပ်နေတယ်, Colosseum သို့မဟုတ် Big Ben ကလူတိုင်းကိုခြွင်းချက်ခံစားရစေသည် (ကျနော်တို့လုံးဝကြောင်းအရ!). သင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းရှိမရှိ Instagram ကိုစှဲလမျးသူ ဒါမှမဟုတ် "စစ်မှန်သော" ခရီးသွား, ကမ္ဘာတဝှမ်းသောအရပ်တို့ကိုမယ့်အရာအားလုံးဖြစ်ပါသည်!
သငျသညျလူဇင်ဘတ်အကြောင်းပြောနေတာသည့်အခါစဉ်းစားပထမဦးဆုံးအရာဘဏ်များဖြစ်ပါသည်. တိုင်းပြည်ကိုကောင်းစွာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ထဲကအတိအကျလူသိများသည်. ဒါပေမယ့်ဘတ်ရဲ့ steepled ဘုရား, ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်အိမ်များ, နှင့်အသေးစားတူးမြောင်းများကသင်မျှော်လင့်ထားချင်ပါတယ်ထက်ပိုပြီးပျော်စရာစေပါ. ဤအရပ်ဌာနကိုဒီတိုက်ကြီးရဲ့မြို့တော်တို့တွင်အဥရောပအတွက်ရှားပါးဝှက်ထားသောကျောက်မျက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဒါကြောင့်ဖွင့်. ဒါဟာဖြစ်ပါသည် လှပသောရာအရပျ, ဘယ်မှာ Petrusse နှင့် Alzette မြစ်များတွေ့ကြံအမှတ်မှာထားကြ၏. သင်ကစားသောက်ဆိုင်အချို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး တင်ပါးဆုံရိုးဘား အနီးတွင် ဗဟိုရင်ပြင်. ထို့အပြင်, , rue Philippe II ကိုစျေးဆိုင်တစည်းရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ပိုကောင်းအနည်းငယ်နှစ်ကောင်သုံးဖြုန်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်! စုပေါင်း. လူဇင်ဘတ် တစ်ဦးတစ်စုံလင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် စိတ်ကူးယဉ်တတ်သော တနင်္ဂနွေ.